Nhau - Mudiki dhizaini anokanganisa ruffle kupa vakadzi simba
Kubva: 15th Gunyana 2020 Fiona Sinclair Scott, CNN
Kuvhura fashoni brand kwakaoma. Kuvhura fashoni brand panguva yedenda repasirese kuri padhuze kusakwanisika.
Kuna Teniola “Tia” Adeola, kutanga kwake paNew York Fashoni Svondo ratidziro yakaitika nguva inopfuura mwedzi mwedzi koronavirus isati yabata misoro mikuru yemafashoni uye yakanyatso kuunza indasitiri yemafashoni yepasi rose kusvika pamabvi.
Anoratidza Adeola muna Kukadzi yaive mukana wekumuratidza ichangobva kusimbiswa eponymous brand kunyika. Dhizaini dzake - dzevechidiki, dzebonde, dzakapusa uye dzakapunzika - dzakabata pfungwa yemuchina wefashoni uye dzakamuchengetedza chinzvimbo che "one chekutarisa".
(Anna Wintour naAdeola paTeen Vogue Inopemberera Chizvarwa Chinotevera chiitiko mu2019 muNew York City.)
Mumazuva akateedzana, mudiki mugadziri aive pamusoro pechirevo, achigara husiku hutatu asati azopunzika.
Uye ipapo zvese zvakachinja. Adeola akadzokera kumusha kwake kwemhuri muLagos, Nigeria, kunotora kunze kwekukiya kwakanyanya.
"Kwanga kuchirwadza," akadaro Adeola, iye zvino adzokera studio yake yeManhattan. "Ndakafara zvikuru nekutenda kugara ndega nemhuri yangu asi kubva pakuva nenzvimbo yangu yekugara mu studio ndikagovana imba nehanzvadzi yangu ... zvaingova zvakawanda."
Akapedza mwedzi wekutanga achinzwa sekunge aive akamira zvachose uye akazvipa nguva yekusuwa. Asi pakupedzisira Adeola akadzokera kubasa. Achifunga nezve izvo zvakamuita kuti aende zvakare, akati asingazeze: "Ini ndinomiririra chizvarwa chinozoshandura nyika."
(Hembe dzakagadzirwa naTia Adeola. Chikwereti: Tia Adeola)
Aine chinangwa icho mupfungwa iye njiva zvakare mukati, achitarisa pendi kwemaawa uye achibatanidzwazve neyekutanga nhoroondo yehunyanzvi mareferensi, ayo akafuridzira akateedzana emeso emeso ane rake siginecha ruffles.
Adeola's ruffles imhinduro yekupandukira kumabhuku enhoroondo enhoroondo aakatanga kudzidza kuchikoro. Sezvaanotaura iye, dudziro yake yechikoro chesekondari akaongorora chipfeko cheSpanish chemuzana ramakore rechi16 mune zvakanaka mifananidzo yemifananidzo. Kubudikidza nekutsvaga kwake kwemabasa kubva panguva iyoyo, akaona kuti paive pasina vanhu vatema vaimiririrwa mumifananidzo, kunze kwekunge vairatidzwa sevaranda kana majee. Kunyangwe izvi zvakanamatira kwaari, akati hazvina kubvisa pachokwadi kuti mbatya dzaive mumifananidzo dzaive dzakanaka.
"Nzira iyo maartist akakwanisa kutora iyo machira, machira, izvo zvishandiso nemabhurasho avo zvaingoshamisa kwandiri," akadaro. "Uye ruffles - vaidaidzwa kuti 'iyo ruff' panguva iyoyo uye yaigadzirwa ne starch ... Kukura kwako kukatyamadza kwawanga uri pamusoro munharaunda."
Ruffles dzaAdeeola dzinoita chimwe chinhu kudzora icho chikamu chenhoroondo. Mukuvashandira mumazano avo, akaisa simba rechitaurwa ruff mumaoko evechidiki uye akasiyana nharaunda yevakadzi. Uye nharaunda ine nhengo dzinokosha: Gigi Hadid, Dua Lipa naLizzo vese vakapfeka zvidimbu zvake.
Vakakurumbira parutivi, Adeola akaita poindi yekuzvikomberedza nevakadzi. "Pangave pasina Tia pasina vakadzi munharaunda medu vanonditsigira uye vanoita kuti zvinhu zvigoneke," akadaro. “Vanhu vanoenda paiyo Instagram peji rechiratidzo voona mifananidzo inoshamisa yavanoda, asi havazive kuti paive nemukadzi wekugadzira, paive nemukadzi wechikadzi wekugadzira bvudzi, paive nemutorwa mifananidzo wemukadzi, paive nemukadzi seti mubatsiri. "Vakadzi vese vemunharaunda medu vanouya mupfungwa kana ndichigadzira mbatya idzi."
Adeola haasi kuzoratidzira panguva yeNew York Fashoni Vhiki munaGunyana, asi ari kushanda pane pfupi firimu kuti aburitse gare gare mukudonha. Nezvinetso zvechirwere ichi zvichiri kuenderera mberi, nzira iri pamberi haina kujeka kune akagadzira, asi chinhu chimwe ndechechokwadi: akatsunga kuramba achienda uye achange achisiya ruffles munzira.